Home Wararka Dilayaashii Al Shabaab oo dil toogasho ah maanta lagu fuliyay
Dilayaashii Al Shabaab oo dil toogasho ah maanta lagu fuliyay
Dowlada Puntland ayaa maanta oo Axad ah dil toogasho ku fulisay 21 xubnood oo lagu helay Shabaabnimo, kuwaas oo lagu kala toogtay Gaalkacyo, Garowe iyo Qardho. Dadkaan la toogtay ayaa horay u qirtay in ay dileen haldoorka reer Puntland.
Magaalada Gaalkacyo ayaa lagu toogtay 18 xubnood, oo lagu helay in ay ka tirsan yihiin ururka Al-shabaab, kuwaas oo horay Maxkamadda ciidamada Puntland ugu riday xukun dil ah. Xukmanayaasha la toogtay waxa ku jira, horjoogayaal sare oo wareysiyo laga qaaday ku qirtay in ay hoggaamin jireen Amniyaadka Al-shabaab ee Gobolka Mudug.
Faysal Axmed Bashiir (Gujis), Maxamed Xaashi Mu’min (Abu-dayib) iyo Maxamed Cali Cuuke (jeeri) ayaa kamid ah horjoogayaasha saaka lagu toogtay Gaalkacyo. Sidoo kale, caasimadda Garoowe waxa saaka lagu toogtay laba xubnood oo ka tirsanaa Al-shabaab, kuwaas oo lagu hayay xabsiga weyn ee Garoowe, halka magaalada Qardho lagu toogtay hal xubin oo Shabaab ah.